ဒီဘရိုင်းနား ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ သူ့စိတ်ကြိုက် အကောင်းဆုံး အသင်း - SPORTS MYANMAR
ဒီဘရိုင်းနား ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ သူ့စိတ်ကြိုက် အကောင်းဆုံး အသင်း
မန်ချက်စတာစီးတီး ကွင်းလယ်လူ ကယ်ဗင်ဒီဘရိုင်းဟာ သူ လက်ရှိ တွဲကစား နေတဲ့ သူတွေနဲ့ အသင်းဖော်ဟောင်းတွေ ပါဝင် နေတဲ့ သူ့စိတ်ကြိုက် အကောင်းဆုံး အသင်း (Dream XI) ကို ရွေးချယ် ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဘယ်ဂျီယံ စတားဟာ မနေ့ညက အင်စတာဂမ် live မှာ ဒီရွေးချယ်မှုကို လုပ်သွား ခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး ဒီဘရိုင်းနား ဟာ လက်ရှိ အချိန်မှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် အစိုးရရဲ့ ညွှန်ကြားချက် အတိုင်း နေအိမ်မှာ သီးသန့် နေထိုင်လျက် ရှိနေပါတယ်။
ဒီဘရိုင်းနားက ကိုရိုနာဗိုင်းရပ် lockdown ကြောင့် အိမ်မှာ နေထိုင် ရတာဟာ အရမ်းကို ခက်ခဲမှု ရှိတယ် ဆိုတာ တွေ့ရှိ ခဲ့ပြီးနောက် သူ့ရဲ့ ကစားသမား ဘဝ ကို မူလ မျှော်မှန်း ထားတာထက် ၂ နှစ်ပိုပြီး ကစား သွားတော့မယ်လို့ ဝန်ခံ ခဲ့ပါတယ်။ ကစားသမား ဘဝကို ၂ ရာသီ ပိုကစား သွားချင်တဲ့ ဒီဘရိုင်းနားဟာ သူ့ရဲ့ အကောင်းဆုံး XI မှာ မန်ချက်စတာစီးတီး အသင်းဖော်တွေ ဖြစ်ကြတဲ့ ဆာဂျီယို အဂွေးရိုး ၊ ရာဟင်းစတားလင်း တို့ကို အပြင် ချဲလ်ဆီး တောင်ပံ တိုက်စစ် ကစားသမားဟောင်း အီဒင်ဟာဇက် ကို ရွေးချယ် ခဲ့ပါတယ်။
ဒီဘရိုင်းနား က “ကျွန်တော့် အတွက် ဂိုးသမား နေရာ မှာတော့ သီဘောက် ကော်တွာ ၊ အီဒါဆန် နဲ့ ပီတာချက် တို့ကြား ကနေ ရွေးချယ် သွားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ခင်ဗျား တို့ကော ဘယ်လို ရွေးချယ် သွားမလဲ? ကျွန်တော် ကတော့ ပီတာချက်ကိုပဲ ရွေးချယ် သွားမှာပါ။ သူ့ရဲ့ ၁၅ နှစ် ကနေ နှစ် ၂၀ လောက် ကစား ခဲ့တဲ့ ကစားသမား ဘဝ တစ်ဦး လုံးကို အခြေခံပြီး ဒီလို ရွေးတာပါ။
ညာနောက်ခံလူ နေရာ မှာတော့ ကျွန်တော် ကိုင်းဝေါ်ကာ ကို ရွေးချယ် ချင်ပါတယ်။ လုံးဝ မယုံနိုင်စရာ ကစားသမား ဖြစ်ပြီး ပါဝါ ကောင်းသလို ပြေးအား ကလည်း အတော် ကောင်းပါတယ်။ ဗဟို နောက်ခံလူ နေရာမှာတော့ ကျွန်တော် ဗင်ဆန့် ကွန်ပနီ ကို ထည့်သွင်း သွားမှာပါ။ သူ့ကို ကစားသမား တစ်ဦး အဖြစ် ယူဆလို့ ရပါတယ်။ သူ မန်နေဂျာ လုံးလုံးတော့ မဖြစ်သေးဘူး ထင်တယ်နော်?
အခြား ဗဟို နောက်ခံလူ နေရာ မှာတော့ ကျွန်တော့် အနေနဲ့ အေမရစ်လာပေါ့ဒ် ၊ ဂျွန်တယ်ရီ ၊ ယန်ဗာတွန်ဂန် ၊ တိုဘီ အယ်ဒါဝီရယ် တို့ထဲက ရွေးချယ် သွားရမှာပါ။ အကယ်၍ ကစားသမား ဘဝ တစ်ခုလုံးစာပဲ သွားမယ် ဆိုရင် ဂျွန်တယ်ရီ ပါပဲ။ ဘယ်နောက်ခံလူ ၊ အကောင်းဆုံး နဲ့ ရူးသွပ်စရာ အကောင်းဆုံး ကတော့ မန်ဒီ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
Underrated အဖြစ်ဆုံး ကစားသမား ကတော့ ဖာနန်ဒင်ညို ပါပဲ။ လူတော်တော် များများ ဟာ သူနဲ့ တွဲဖက် မကစား ဖူးခဲ့ရင် သူ့အကြောင်း သိမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ သူဟာ အသက် ၃၅ နှစ် ပြည့်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ ဘာလုပ် နေသလဲ ဆိုတာ ခင်ဗျားတို့ တွေ့မှာပါ။ တကယ့်ကို မယုံနိုင်စရာ ပါပဲ။
ကွင်းလယ် တိုက်စစ် ကစားသမားတွေ အဖြစ် ကျွန်တော် ဒေးဗစ်ဆေးလ်ဗား နဲ့ အနည်းငယ် တွဲဖက် ကစား ဖူးခဲ့တဲ့ ဖရန့်လမ်းပတ် တို့ကို ရွေးချယ် သွားချင် ပါတယ်။ တိုက်စစ်မှုးတွေ အဖြစ် အီဒင်ဟာဇက် ၊ ကန်အဂွေးရိုး နဲ့ ရာဟင်းစတားလင်း တို့ကို ရွေးချယ် သွားရမှာပါ။” လို့ ဆိုလိုက် ပါတယ်။
ဒီဘရိုင်းရဲ့ အကောင်းဆုံး XI ကတော့..ပီတာချက် ၊ ကိုင်းဝေါ်ကာ ၊ ကွန်ပနီ ၊ တယ်ရီ ၊ မန်ဒီ ၊ ဖာနန်ဒင်ညို ၊ ဒေးဗစ်ဆေးလ်ဗား ၊ ဖရန့်လမ်းပတ် ၊ အဂွေးရိုး ၊ စတားလင်း ၊ ဟာဇက်
ဒီဘရိုင်းနား ဟာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် ပွဲစဉ်တွေ ရွေ့ဆိုင်းထားမှု မလုပ်မီ မန်စီးတီး ကစားသမား ဘဝ တစ်လျှောက် သူ့ရဲ့ အကောင်းဆုံး ရာသီကို ပိုင်ဆိုင် ထားကာ အထူး ခြေစွမ်းပြ ကစား နေပါတယ်။ အသက် ၂၈ နှစ် အရွယ် ကစားသမားဟာ ဒီရာသီ ပရီးမီးယားလိဂ် မှာ ၈ ဂိုးသွင်းကာ ၁၆ ဂိုး ဖန်တီး ထားခဲ့ပြီး ပြီးခဲ့တဲ့ ဖေဖော်ဝါရီလက ကလပ် နဲ့ အတူ ကာရာဘောင် ဖလားကို ဆွတ်ခူး ထားခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။